Wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne Lafta gareen oo dib ugu laabtay Baydhabo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne Lafta gareen oo dib ugu laabtay Baydhabo
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne Lafta gareen oo dib ugu laabtay Baydhabo
Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb uga soo qeyb galay shirkii wada tashiga madaxda dowlada federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaaladq Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxweyne Lafta Gareen iyo wafdigiisa ayaa si weyn waxaa loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo,waxaana afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud madaxweyne Lafta Gareen iyo wafdigiisa kusoo dhaweeyay kumanaan ruux oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka,dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka oo la dhacsanaa sida kartid leh ee madaxweyne Lafta Gareen uu bulshada Koonfur Galbeed ugu matalay shirkii Dhuusamareeb.
Kumanaanka ruux ee sida aan caadiga aheyn u soo dhaweyay madaxweyne Lafta Gareen iyo wafdigiisa ayaa waxa ay wateen boorar amaan iyo soo dhaweyn isugu jira oo ay ugu tala galeen madaxweyne Lafta Gareen oo shir muhiim u ah masiirka umadda Soomaaliyeed Dhusamareeb uga soo qeyb galay.
Si kastaba ha’ahaatee shacabka magaalada Baydhabo oo inta badan ka qeyb galay soo dhaweynta madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa madaxweynaha ku amaanay go’aanka geesinimada leh ee uu kaga qeyb galay shir looga tashanayo aayaha iyo mustaqbalka umadda Soomaaliyeed iyo khudbadda uu ka jeediyay shirka oo aheyd mid dhinacyo badan taabaneysay.
Dhankiisa madaxweynaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa shacabka magaalada Baydhabo uga mahad celiyay sida ay ugu soo wada baxeen soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayay,waxaana uu balan qaaday in mar walba oo u taagnaan doono dhismaha aayahaha umadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxyaabaha ay dadka shacabka ku amaaneen madaxweyne Lafta Gareen intii uu ku maqnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa kamid ahaa kaalinta uu ka qaatay gurmadka fatahaadaha wabiga Shabelle uu ka sameeyay qeybo kamid ah degmada Afgooye iyadoo madaxweyne Lafta Gareen uu dowladda federaalka sida ugu dhaqsiyaha badan uga codsaday in gurmadka shacabka Afgooye ay qeyb ka noqoto,taas oo keentay in dowladda Soomaaliya ay nus malyuuun dollar ugu deeqdo howlaha gurmadka ee fatahaadaha Afgooye.
Shirkii u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa ah mid wada tashi oo looga arinsanayay nuuca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadka soo aadan iyo sidii la isugu soo dhawaan lahaa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Lafta Gareen ayaa mudo u joogay Dhuusamareen shirkaasi iyadoo uu kamid ayaa madaxweynayaashii khudbadaha ugu xasaasisan ka jeediyay shirkaasi oo lagu balamay in wajigiisa labaad dib la isugu laabto.
Ugu Danbeyn madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa tan iyo markii uu yimid xafiiska madaxweyne ee Koonfur Galbeed waxa uu si hagar la’aan ugu shaqeenayaa bulshada Koonfur Galbeed isagoo tan iyo markaasi ka qeyb galay shirar dhowr ah oo looga arinsanayay masiirka dalka,waxaana taasi ay ifafaalo wanaagsan u tahay shacabka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed.
Maqaal horeXuska madaxdii ku dhimatay qaraxii sanad ka hor ka dhacay Dowladda Hoose oo Muqdisho ka socdo
Maqaal XigaMadaxweynaha Jubbaland oo dib ugu laabtay Kismaayo kadib shirkii Dhuusamareeb